Honor 9X Pro wuxuu noqonayaa moobilkii ugu horreeyay ee shirkadda ay la socoto Kirin 810 | Androidsis
Kirin 810 sugaya: Honor 9X Pro wuxuu noqon doonaa kan ugu horreeya ee shirkadda qalabeeya
El Kirin 810 waa dhaxal sugaha Kirin 710. Chipset-kan ayaa sameyn doona joogitaanka aaladaha cusub ee dhexdhexaadka ah ee Huawei iyo Honor ee waxqabadka ugu sarreeya, iyo sidoo kale waxaa la filayaa inay la tartanto Snapdragon 730 laga bilaabo Qualcomm, boqorka hadda ee qaybta dhexe ee SoC.
Waxaa la filayaa in lagu soo bandhigo markii ugu horeysay ee Cusub 5 Pro tan soo socota Juun 21. Intaas waxaa dheer, Waxay sidoo kale imaan doontaa Honor 9X Pro, waana waxa aan ka hadlayno xiga.
Kuwani waa astaamaha suurtagalka ah iyo qeexitaanka Honor 9X Pro
Sharafta sharafta 9X (pro) faahfaahinta
6.5 "-6.7" shaashadda lcd (male)
48 mp imx582 kamarad hoose oo leh 8 mp swa
2mp macro iyo 2mp qoto dheer
20w lacag go'an
25 kamarada hore (dalool macquul ah)
Naqshad 3d galaas ah# Mudane9XPro
- Teme (特米) (@ RODENT950) June 17, 2019
Isticmaalaha @ RODENT950 on Twitter, wuxuu soo dhigay a Maamuus 9X Pro faahfaahinta. Tani waa qayb ka mid ah kooxda @SlashLeaks, markaa waxaan dhihi karnaa waa ilo lagu kalsoonaan karo. Si kastaba ha noqotee, ka hor intaadan sii socon, waa inaad ka taxaddartaa oo aadan raacin 100% kuwan, illaa inta si rasmi ah looga xaqiijinayo ama ay la socdaan caddayn lagu qanci karo.
Hadda, iyada oo ku saleysan macluumaadka la bixiyay, Honor 9X wuxuu ku garaacayaa suuqa shaashad dhan 6.5 ilaa 6.7-inch shaashad LCD ah iyo muraayad 3D ah. Xaqiiqda Sharaf 8X wuxuu ku faanaa guddi 6.5-inji ah. Sidaa darteed, waa wax dabiici ah soo-saaraha inuu ku kordhiyo cabbirka shaashadda xoogaa mobilka cusub.
Sida kamaradaha, terminaalku wuxuu isticmaali doonaa qaabeynta afar gees ee gadaal, kaas oo ka koobnaan doona 582 MP Sony IMX48 aaladda hoose, lens-ka 8 MP oo ballaadhan, lens 2 makro lens iyo 2 MP sensor ugu dambeysa oo qoto dheer.
Kirin 810 waa Huawei bartamaha soo socda ee 7nm SOC iyada oo iskeed u horumarisay isku dhafka NPU &
waxaa loo isticmaali doonaa Nova 5 (nooca caadiga ah) & Honor9XPro.
Kirin 970 & 980 waxay adeegsadaan Cambrian NPU oo ka socda Cambricorn Technolgy.
- Kooxda Huawei (@ClubHuawei) June 17, 2019
Qadka dhexe premium sidoo kale yeelan doonaan a 4,000 mAh baytari awood leh oo leh 20 watt taageero degdeg ah oo degdeg ah, Kamarad sawir qaade ah oo 25 MP ah ayaa lagu dhejiyay godka suuragalka ah ee shaashadda.
Hadda dib ugu laabo mawduuca Nidaamka Hip-ka, Honor 9X Pro wuxuu noqon doonaa taleefankii ugu horreeyay ee Sharaf leh ee lagu qalabeeyo Kirin 810. Mid kale oo isna lagu xusay inuu qaado waa nooca caadiga ah ee Nova 5. Si kastaba ha noqotee, marka loo eego kan dambe, wararka xanta ah iyo mala-awaalku waxay soo jeedinayaan inay noqon doonto nooca Pro ee soo bandhigi doona. Waxaas oo dhan waa la arki doonaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Kirin 810 sugaya: Honor 9X Pro wuxuu noqon doonaa kan ugu horreeya ee shirkadda qalabeeya
Huawei wuxuu ka shaqeeyaa telefoonno isku laaban. Waanuna jecel nahay naqshadeeda!
Huawei wuxuu shatiyeeyay taleefan cusub oo isku laaban